Uyigcina njani ikhefu ngexesha lokubaleka
Ngenxa yokuphuhliswa okukhawulezayo kunye nokukhula kwemveliso yobuchwephesha kunye nokulungiswa, kunye nokuphuculwa ngokuthe ngcembe kwezixhobo zoomatshini kumacandelo ahlukeneyo, iimfuno zezixhobo zesicelo ziya zikhula ngokunyuka. Kufuneka yaziwe ukuba iimveliso zabenzi bokuphula abakhulu ...
Amanyathelo okhuseleko ekusebenzeni komaphuli
Isaphuli sesinye sezixhobo ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwizimbiwa. Ukuze idlale indima yayo kwixesha elide kwaye ibe sisixhobo esifanelekileyo, kufuneka isetyenziswe kwaye igcinwe ngokuchanekileyo njengezinye izixhobo. Nangona kunjalo, ukungahoyi ezinye zeenkcukacha kunye nokusebenza gwenxa ngexesha lokusetyenziswa kuya kuba nefuthe elibi kwirgg yethu ...
Indlela yokukhetha ikhefu
Amandla esaphuli ngumbiwa kunye nomlayishi. Banokususa ngokukuko umhlaba kwiintanda eziphakathi kwelitye lepumice kunye nelitye, ngaloo ndlela badlale indima yokomba isiseko sesakhiwo. Xa ukhetha ikhefu enkulu, le micimbi ilandelayo kufuneka iqwalaselwe: 1 ...